के कारण Sciatic तंत्रिका दुखाई हुन्छ
समय: 2019-06-25 दृश्य:
के कारण Sciat Nerve दर्द र कसरी उपचार गर्ने को कारण हुन्छ
साइयाटिक स्नायुमा L4-S2 कहिले पनि जरा हुँदैन. साइटिका तल्लो पछाडिबाट खुट्टा तल झर्दै पीडाको चिकित्सा अवस्था हो. तल साइटिकाका मुख्य कारणहरू छन्.
1. मेरुदण्ड डिस्क हर्नियसन
बारेमा 90% समय को साइटिका एक को कारण हो मेरुदण्ड डिस्क हर्नियसन कुनै एकमा थिच्दै काठ वा sacral तंत्रिका जरा. यो काठ मांसपेशियों को ऐंठन संगै हुनेछ, सीमित लम्बर गति, ets. इन्टरभेर्टेब्रल डिस्क हर्निएटेड भागहरूमा स्पष्ट कोमलता र विकिरण दुखाइ हुन सक्छ।
2. स्पाइनल स्टेनोसिस
काठको मेरुदण्डको स्टेनोसिसको कारण हुने सायटिका निकै पटक हुन्छ. जुन मेरुदण्डको नहर संकुचन को स्थिति हो र स्पाइनल कर्ड संकुचित, वा साइयाटिक स्नायु जरा.
3. आन्तरिक अंग रोगहरू
केही कटिबिन्दु आन्तरिक अ diseases्गको रोगका कारण हो. जस्तै गर्भाशयको संक्रमण र यसको जोडहरू. ट्यूमरले लुम्बोसक्रल क्षेत्रमा दुखाइ ल्याउन सक्छ. र यस प्रकारका बिरामीहरू प्रायः त्यस्तै स्त्रीरोग सम्बन्धी लक्षणहरूको साथ हुन्छन्.
रिक्ट्स भएका बिरामीहरूले काठको रोगको गुनासो पनि गर्न सक्दछन्, तर कुनै उद्देश्य चिह्न छैन,वा वस्तुनिष्ठ जाँच र व्यक्तिपरक कथा शारीरिक शारीरिक रचना र पैथोलॉजिकल ज्ञान द्वारा वर्णन गर्न सकिदैन. यस प्रकारको कम पीठो दुखाइ सामान्यतया रिकेट्सको लक्षण हुन्छ।
डिस्क हर्निएसनको प्रारम्भिक चरणमा, केही बिरामीहरूले कडा ओछ्यानमा आराम गरेर लक्षणहरू कम गर्न सक्दछन् 3-4 हप्ता.
एक. रासायनिक औषधि:
मौखिक रूपमा एनाल्जेसिक लिदै, भिटामिन बि, कोर्टिकोस्टेरोइडले लक्षणहरूलाई कम गर्न सक्छ, तर कट्टरपन्थी उपचार उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्दैन। यो विधि गम्भीर साइटिका बिरामीहरू द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर धेरै हुन सक्दैन. अन्यथा, यसले कलेजो र मिर्गौलालाई नोक्सान पुर्‍याउँछ.
बी. परम्परागत चिनियाँ चिकित्सा:
केहि वैज्ञानिक रुपमा तैयार सामग्री चीनमा साइटिका र हर्निएटेड डिस्कको प्रभावकारी समाधानको लागि बढी प्रमाणित गरिएको छ 100 वर्ष. धेरै 10,000 चीनमा क्लिनिक केस र 90% ती प्रभाव र सुरक्षा प्रमाणित छन्।
केहि केसहरूले स्पाइनल हेरफेर तीव्र साइटिकाका लागि एक प्रभावी उपचार हो भनेर प्रमाणित गर्‍यो. तर प्रमाण क्रोनिक साइटिकाका लागि कमजोर छ. तर जब त्यहाँ प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल घाटाहरू छन्, मेरुदण्ड हेरफेर contraindated छ.
आंत्र वा मूत्राशय समस्या जस्ता जटिलताहरू आयो भने शल्य चिकित्सा आवश्यक हुन सक्छ.
अघिल्लोस्पेन प्रतिनिधिमण्डल मेदोनकेयर भ्रमण गरे
अर्कोप्रोस्टेट क्यान्सर चरणहरू: उनीहरू के भन्न खोज्छन्?